Fitaovana manokana sy fifanarahana R & D Apicmo cdmo Manufacturers
Our Services > Fomba amam-panao manokana sy fifanarahana R & D
Ny APICMO dia afaka manolotra ity tolotra manaraka ity, izay samy voarohiran'ny politikantsika matanjaka momba ny fiarovana ara-tsaina (IP), ny fiantohana ny tetik'asa dia miorina amin'ny fatokisana lalina amin'ny fotoana rehetra.
Fampandrosoana ny arifomba
Ny haavon'ny asa-manomboka amin'ny grama ka hatramin'ny Metric Tons
Exclusivity raha ilaina
Fanohanana ara-analytika feno, anisan'izany ny HPLC, GC-MS sy NMR
Ho an'ireo vokatra izay efa misy ny famokarana dia efa misy ny APICMO afaka manolotra fifanarahana sy ny famokarana serivisy ho an'ny mpanjifa manokana. Ankoatra ireo tolotra voatonona etsy ambony, dia manome tolotra fanodinan-tsokosoko manokana (tsy misy sarany fanampiny) izahay mba hahazoana antoka fa raha azo atao dia mampiasa loharanom-pahalalàna avo lenta isika amin'ny vidin'ny tsena.
Ny APICMO koa dia afaka manolotra fikarohana fikarohana sy fampandrosoana manokana mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa. Manana traikefa tsara dia tsara isika amin'ny famahana ny olana ara-tsiansa ara-boajanahary ho an'ny mpanjifantsika sy ny tetikasa dia mety mifototra amin'ny fivalanana manontolo (FTE) na ny tahan'ny isan'andro. Mifandraisa aminay mba hahafantarana hoe ny ekipa R & D manana traikefa dia afaka mamolavola ny tetikasanao manaraka ny fahombiazantsika farany.